Kungenzeka yini ukuba isazi sokumaketha injini yokusesha ngokubhuloga?
Namuhla, kuwumqondo ovamekile wokuthi yonke i-blogger ephumelelayo ingahlakulela ikhono elikhulu lokuba isazi sokukhangisa nge-injini yokusesha. Futhi kungenzeka kanjani ukuthi lowo mbono ungabonakala? Ngempela, ingabe yenza umqondo? Kodwa ngiyaqiniseka ukuthi yebo, kunjalo. Into efana nokuthi i-blogger esebenzayo, angikaze ngizicabange nginjengomchwepheshe wokuthengisa injini yokusesha. Noma kunjalo, ukubhuloga nokubeka uhlu kubonakala kubonakala kungena ngezandla, kunikezwe ukuthi i-blogger enekhono inezinqumo ezisebenzayo zokubeka phambili ekugxileni emsebenzini. Ngakho-ke, ake sibone lonke indaba.
Eminyakeni eyisikhombisa edlule, ngethula ibhulogi yami yokuqala. Uhlelo lwami lokubloga lwanikezelwa izithuthuthu, futhi manje ngingaqiniseka ngokuthi okungenani into eyodwa - ukwenza kanjalo, nginenhlanhla yokwenza isinqumo esingcono kakhulu sokusebenza. Lezo zikhathi zadlula isikhathi eside, futhi angikhumbuli lutho olukhethekile, ngaphandle kokuzizwa ngithukuthele, njengoba nje ngangilokhu ngilinde nomphathi wami wangaphambili, ngezizathu ezithile ezingajwayelekile zokubeka usuku lokubekwa kwami ​​okusemthethweni. Kodwa manje ngiyajabula ukubhekana nalolu daba lwama-awkward. Ngemuva kwakho konke, namuhla ngisebenza eziningana zokuqala, futhi ngifika isikhathi sokuphumula. Ukukhumbula lezo zinsuku, ngiyaqonda ukuthi ngokuyinhloko ukubhuloba kube yingxenye ebalulekile yentuthuko yami yamanje njengososayensi wezokuthengisa. Ngezinye izikhathi angikwazi neze ukukholelwa ukuthi sekwenzekile, ngokuqondene neminyaka emibili yamuva ngangihileleke kumamojula amaningi kakhulu wokuthengiswa kwedijithali, njengokuqukethwe, imidiya yezokuxhumana kanye nokuthengisa i-imeyili, ukusekela injini yokusesha, ukukhangisa kwe-digital kanye nokunye okusebenzayo izinto engingakwazi ngisho nokufaka ngesiNgisi esicacile.
Ngangisebenza nje ukushayela imikhankaso yokukhangisa ye-intanethi ephezulu yamaklayenti ngabanye abafuna ukuba nemikhiqizo yabo entsha futhi ithuthukiswe kusukela ekuqaleni kwesikhathi sokuhamba. Ngangingenaso isithakazelo sokuba ngumchwepheshe kunoma yimuphi walabo, kodwa ngelinye ilanga ngase ngiqaphela ukuthi nje ngiphonswa ngokujulile ezindabeni, ngiye ngazi kahle ingxenye yengonyama yabo, ngikhokhela cishe akukho mzamo owengeziwe ngaleyo njongo.
Futhi lapha sifike ekugcineni. Ungaba kanjani isazi sokumaketha injini yokusesha ngaphandle kokuthatha impilo yakho yonke? Futhi ngiyazonda izindlela zendabuko njengoba zivame ukudla imizamo eminingi kakhulu ngokubuya kwezimali zero isikhathi sokufunda. Ngiyakholwa ukuthi ungafunda isihloko kuphela uma usebenzisa ulwazi olusha futhi uqhubeke nokuthuthela empumelelweni yakho ngesinyathelo ngesinyathelo. Futhi ngokucabangela isimo sabo sokuguqula, ake sibone wonke amakhono angakusiza ukuba ube isazi sokumaketha nge-search engine, kuqala nje ngebhulogi yakho. Kungase kubonakale kumangalisa, kodwa awukwazi ukubheja emgwaqweni ophilayo.
Ngakho-ke, akudingeki ulinde kuze kube yilapho okuthunyelwe kwakho kubhulogi okusha kuyithola. Manje ungathola i-traction ngokushesha, usebenzisa kuphela i-Google Adwords (noma izikhangiso ze-Bing) ngezindleko ezilinganiselwe, uma unikezela ngokuyinhloko ukuqaphela kwakho noma ucwaningo olubalulekile lwegama elingukhiye. Yilokho okudingayo ukuqala ukuhamba ngendlela efanele ukuze ube isazi sokumaketha injini yokusesha. Yiqiniso, ngaphandle kokusebenzisa leli qhinga, uzobe unezinto eziningi ongayenza, njengokudala imikhankaso yezikhangiso kanye nezikhangiso, nokuhlola nokwenza ngcono konke ongayisebenzisa. Ngaleyo ndlela, uzofunda kancane kancane isihloko sokugcina ube isazi esinzima sokusesha injini yokusesha Source .